Asphalt Fan တွေအတွက် နောက်ထပ် Game အသစ်ကို Gameloft က ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ
26 Jul 2018 . 11:14 AM
Asphalt နာမည်နဲ့ Racing Game တွေကို သဘောကျသူတွေအများကြီးပါ။ Racing Game တွေထဲမှာ ဆော့ရတာ ပျော်စရာအပြည့်နဲ့ Graphic ကောင်းကောင်းဆိုရင် Asphalt လို့ပဲပြောကြမှာပါ။ Game တွေကသိပ်ကောင်းသလို သင့်ဆီမှာလည်း Flagship ဖုန်းတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် Tablet ကောင်းကောင်း တစ်လုံးတော့ ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဂိမ်းအသစ်ကတော့ Asphalt ပရိသတ် မျှော်လင့်နေတဲ့ Asphalt9ဖြစ်ပြီး Gameloft ကအခု နိုင်ငံတော်တော်များများအတွက် ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
အခုအခြေအနေမရောက်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က Asphalt Urban GT ဆိုတာနဲ့ Asphalt Series ကို Gameloft ကုမ္ပဏီက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Need For Speed ဆန်ဆန် Game အမျိုးအစားဖြစ်ပေမယ့် ဆော့ရတဲ့ အရသာကတော့ သီးသန့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Gameloft ရဲ့ အနှစ်လို့ပြောလို့ရလာတဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Racing Game တွေအနေနဲ့ လူသိများလာပါတယ်။ Racing ကိုမှ သဘောကျတဲ့ Gamer တွေရဲ့ လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖုန်းတွေကြောင့် Asphalt Game တွေ နေရာရလာပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လူသိများပြီး အဆော့အများဆုံးဖြစ်လာခဲ့တာကတော့ Asphalt7နဲ့ နောက်ထပ်ထွက်တဲ့ Asphalt 8 တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အသစ်အနေနဲ့ Asphalt 9: Legends ဆိုတာကို iOS ၊ Android နဲ့ Windows 10 Device တွေအတွက် ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Game ကို အခုလို နိုင်ငံတော်တော်များများအတွက် မထုတ်ပေးခင်မှာ တချို့နိုင်ငံအတွက် Pre-release အနေနဲ့ ထုတ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Fun to play Gameplay
Asphalt9ကတော့ အရင်က ထွက်ခဲ့ပြီးသား Asphalt 8 Airborne ထက်အရာရာမှာ ပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Graphic ပိုင်းနဲ့ ကားအသစ်တွေကအစ ဆော့ရတဲ့အပိုင်းမှာပါ သိသိသာသာပိုကောင်းလာပါတယ်။ HDR ဆန်ဆန် Graphic နဲ့ အရောင်ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာကလည်း ဖုန်းပေါ်မှာဆော့ရတဲ့ Game တစ်ခုအနေနဲ့ သိပ်ကောင်းလွန်းနေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Gameplay ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဆော့သွားရင်း Lock ဖြစ်နေတဲ့ ကားတွေရဲ့ Blueprint တွေနဲ့ Gold တွေ Game Credit တွေစုရင်း ကားတွေ Unlock လုပ်ပြီး Level တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆော့သွားရမှာပါ။
Multiplayer နဲ့ Club ဆိုတာတွေလည်း ပါပါတယ်။ Map တွေကိုလည်း အရင်ထက် ပိုပြီး လှလှပပဖြစ်နေအောင် အသေးစိတ်ပြင်ထားတာကလည်း ဆော့ရတာပိုအရသာရှိစေပါတယ်။ Asphalt9မှာတော့ Asphalt 8 မှာ မပါဘဲ ချန်ထားခဲ့တဲ့ Feature တစ်ခုပြန်ပါလာပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Nitro Shockwave ဆိုတာပြီးပြီး Nitro ခလုတ်ကို နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် ခရမ်းရောင်အလင်းတန်းကြီးထွက်လာတာပါ။
ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အရင်ကလိုပဲ Class D ၊ C ၊ B ၊ A နဲ့ S ဆိုပြီး ခွဲထားပေးပါတယ်။ အရင် Game တွေမှာ ပါခဲ့ဖူးတဲ့ San Francisco နဲ့ Shanghai လိုမြို့က လမ်းမကြီးတွေ ပြန်ပါလာသလို အသစ်အနေနဲ့လည်း Rome ၊ Cairo နဲ့ Himalayas တွေလည်း ပါလာပါတယ်။ ကားအသစ်တွေအနေနဲ့လည်း Bugatti Chiron နဲ့ Lamborghini Centenario လိုမျိုး Super Car တွေထပ်ပါလာပါတယ်။ Asphalt Game တွေမှာ တွေ့နေကျအချက်ဖြစ်တဲ့ မြူးမြူးကြွကြွ သီချင်းအသစ်တွေကိုလည်း Asphalt9မှာ ပါလာပါသေးတယ်။ Game ကို အခုလို နိုင်ငံအများကြီးအတွက် မထုတ်ပေးခင်ကတော့ Philippines နဲ့ Thailand နှစ်နိုင်ငံမှာ ကြိုထုတ်ပေးထားပြီးသားပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ July 26 မှာ Game ကိုနိုင်ငံတစ်ကာအတွက် ထုတ်ပေးတော့မယ်ဆိုတာကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Asphalt9ကို Gameloft က ဖန်တီးနေခဲ့တာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ Gameloft Barcelona က မြေပုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖန်တီးနေတာတွေကို Twitter မှာပုံတွေတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ Asphalt 9: Shockwave လို့နာမည်ပေးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Asphalt 9: Legends ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တာပါ။ Game Size ကတော့ 1.5GB ရှိပါတယ်။ Android 4.3 နဲ့အထက်ရှိတဲ့ Phone တွေ၊ Tablet တွေမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ဆော့နိုင်ပေမယ့် Graphic Quality ကတော့ Device Model အလိုက် ကွာခြားတာမျိုးရှိမှာပါ။ iOS Version ကတော့ iOS 8 နဲ့အထက်ရှိတဲ့ iPhone 5s အပါအဝင် နောက်ထွက်တဲ့ iPhone တွေ၊ iPad Air နဲ့နောက်၊ iPad mini2နဲ့နောက်ထွက်တဲ့ iOS Device တွေမှာ ဆော့လို့ရနိုင်မယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ iOS အတွက်တော့ App Store မှာ Download ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Android အတွက်တော့ Google Play ကို VPN ခံပြီးမှ Dowload ဆွဲလို့ရနိုင်မှာပါ။ VPN သုံးနည်းကိုတော့ အခုဖော်ပြထားတဲ့ Link မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Asphalt Fan တှအေတှကျ နောကျထပျ Game အသဈကို Gameloft က ထုတျပေးလိုကျပွီ
Asphalt နာမညျနဲ့ Racing Game တှကေို သဘောကသြူတှအေမြားကွီးပါ။ Racing Game တှထေဲမှာ ဆော့ရတာ ပြျောစရာအပွညျ့နဲ့ Graphic ကောငျးကောငျးဆိုရငျ Asphalt လို့ပဲပွောကွမှာပါ။ Game တှကေသိပျကောငျးသလို သငျ့ဆီမှာလညျး Flagship ဖုနျးတဈလုံး ဒါမှမဟုတျ Tablet ကောငျးကောငျး တဈလုံးတော့ ရှိနဖေို့လိုပါတယျ။ ဂိမျးအသဈကတော့ Asphalt ပရိသတျ မြှျောလငျ့နတေဲ့ Asphalt9ဖွဈပွီး Gameloft ကအခု နိုငျငံတျောတျောမြားမြားအတှကျ ထုတျပေးလိုကျပါပွီ။
အခုအခွအေနမေရောကျခငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှဈဝနျးကငျြက Asphalt Urban GT ဆိုတာနဲ့ Asphalt Series ကို Gameloft ကုမ်ပဏီက စတငျခဲ့ပါတယျ။ Need For Speed ဆနျဆနျ Game အမြိုးအစားဖွဈပမေယျ့ ဆော့ရတဲ့ အရသာကတော့ သီးသနျ့ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ Gameloft ရဲ့ အနှဈလို့ပွောလို့ရလာတဲ့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ Racing Game တှအေနနေဲ့ လူသိမြားလာပါတယျ။ Racing ကိုမှ သဘောကတြဲ့ Gamer တှရေဲ့ လကျထဲမှာရှိနတေဲ့ ဖုနျးတှကွေောငျ့ Asphalt Game တှေ နရောရလာပါတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ လူသိမြားပွီး အဆော့အမြားဆုံးဖွဈလာခဲ့တာကတော့ Asphalt7နဲ့ နောကျထပျထှကျတဲ့ Asphalt 8 တှပေဲဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ အသဈအနနေဲ့ Asphalt 9: Legends ဆိုတာကို iOS ၊ Android နဲ့ Windows 10 Device တှအေတှကျ ထုတျပေးလိုကျပါပွီ။ Game ကို အခုလို နိုငျငံတျောတျောမြားမြားအတှကျ မထုတျပေးခငျမှာ တခြို့နိုငျငံအတှကျ Pre-release အနနေဲ့ ထုတျပေးပွီးသားဖွဈပါတယျ။
Asphalt9ကတော့ အရငျက ထှကျခဲ့ပွီးသား Asphalt 8 Airborne ထကျအရာရာမှာ ပိုကောငျးလာတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ Graphic ပိုငျးနဲ့ ကားအသဈတှကေအစ ဆော့ရတဲ့အပိုငျးမှာပါ သိသိသာသာပိုကောငျးလာပါတယျ။ HDR ဆနျဆနျ Graphic နဲ့ အရောငျပိုငျးမှာ ပိုကောငျးအောငျလုပျပေးထားတာကလညျး ဖုနျးပျေါမှာဆော့ရတဲ့ Game တဈခုအနနေဲ့ သိပျကောငျးလှနျးနတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ Gameplay ကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ ဆော့သှားရငျး Lock ဖွဈနတေဲ့ ကားတှရေဲ့ Blueprint တှနေဲ့ Gold တှေ Game Credit တှစေုရငျး ကားတှေ Unlock လုပျပွီး Level တှတေဈခုပွီးတဈခု ဆော့သှားရမှာပါ။
Multiplayer နဲ့ Club ဆိုတာတှလေညျး ပါပါတယျ။ Map တှကေိုလညျး အရငျထကျ ပိုပွီး လှလှပပဖွဈနအေောငျ အသေးစိတျပွငျထားတာကလညျး ဆော့ရတာပိုအရသာရှိစပေါတယျ။ Asphalt9မှာတော့ Asphalt 8 မှာ မပါဘဲ ခနျြထားခဲ့တဲ့ Feature တဈခုပွနျပါလာပါတယျ။ အဲ့တာကတော့ Nitro Shockwave ဆိုတာပွီးပွီး Nitro ခလုတျကို နှဈခကျြနှိပျလိုကျရငျ ခရမျးရောငျအလငျးတနျးကွီးထှကျလာတာပါ။
ကားတှနေဲ့ ပတျသကျလို့တော့ အရငျကလိုပဲ Class D ၊ C ၊ B ၊ A နဲ့ S ဆိုပွီး ခှဲထားပေးပါတယျ။ အရငျ Game တှမှော ပါခဲ့ဖူးတဲ့ San Francisco နဲ့ Shanghai လိုမွို့က လမျးမကွီးတှေ ပွနျပါလာသလို အသဈအနနေဲ့လညျး Rome ၊ Cairo နဲ့ Himalayas တှလေညျး ပါလာပါတယျ။ ကားအသဈတှအေနနေဲ့လညျး Bugatti Chiron နဲ့ Lamborghini Centenario လိုမြိုး Super Car တှထေပျပါလာပါတယျ။ Asphalt Game တှမှော တှနေ့ကေအြခကျြဖွဈတဲ့ မွူးမွူးကွှကွှ သီခငျြးအသဈတှကေိုလညျး Asphalt9မှာ ပါလာပါသေးတယျ။ Game ကို အခုလို နိုငျငံအမြားကွီးအတှကျ မထုတျပေးခငျကတော့ Philippines နဲ့ Thailand နှဈနိုငျငံမှာ ကွိုထုတျပေးထားပွီးသားပါ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ July 26 မှာ Game ကိုနိုငျငံတဈကာအတှကျ ထုတျပေးတော့မယျဆိုတာကို ကွညောလိုကျပါတယျ။
Asphalt9ကို Gameloft က ဖနျတီးနခေဲ့တာ ၂၀၁၆ ခုနှဈကတညျးကပါ။ Gameloft Barcelona က မွပေုံပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဖနျတီးနတောတှကေို Twitter မှာပုံတှတေငျထားခဲ့ပါသေးတယျ။ Asphalt 9: Shockwave လို့နာမညျပေးခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ Asphalt 9: Legends ဆိုပွီး ထှကျလာခဲ့တာပါ။ Game Size ကတော့ 1.5GB ရှိပါတယျ။ Android 4.3 နဲ့အထကျရှိတဲ့ Phone တှေ၊ Tablet တှမှော အဆငျပွပွေနေဲ့ဆော့နိုငျပမေယျ့ Graphic Quality ကတော့ Device Model အလိုကျ ကှာခွားတာမြိုးရှိမှာပါ။ iOS Version ကတော့ iOS 8 နဲ့အထကျရှိတဲ့ iPhone 5s အပါအဝငျ နောကျထှကျတဲ့ iPhone တှေ၊ iPad Air နဲ့နောကျ၊ iPad mini2နဲ့နောကျထှကျတဲ့ iOS Device တှမှော ဆော့လို့ရနိုငျမယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ iOS အတှကျတော့ App Store မှာ Download ဆှဲနိုငျမှာဖွဈပွီးတော့ Android အတှကျတော့ Google Play ကို VPN ခံပွီးမှ Dowload ဆှဲလို့ရနိုငျမှာပါ။ VPN သုံးနညျးကိုတော့ အခုဖျောပွထားတဲ့ Link မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
by 2B . 1 day ago
by 2B .6days ago